27 Responses to “ဆေးစွမ်းကောင်း”
သိပ်မှန်တယ် လူတစ်ယောက်ရဲ့အားပေး စကားတစ်ခွန်းဟာ နောက်လူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်မှာမှမရနိုင်တဲ့ ဆေးတစ်ခွက်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်..။
သူတို့ ဘာတွေရေးထားကြတာလဲ ပြောပြလေ။း))
October 7, 2011 at 5:25 PM
ဟုတ်ပါတယ် မချောရေ၊ လင်မယားကြား၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းကြား တစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းကွက်တွေကို တစ်ယောက်က အသိအမှတ်ပြု၊ ချီးကျူးဖို့ဟာ တကယ်ပဲ အရေးကြီးတာပေါ့၊ ကျနော်တို့က အပြစ်မြင်မိရင်သာ လွှတ်ကနဲ ပြောလိုက် တတ်ကြပေမယ့် ကျေးဇူးစကားလေး တစ်ခွန်း၊ အသိအမှတ်ပြု စကားလေး တစ်ခွန်း ထွက်ကျလာဖို့ ကျတော့ နှုတ်လေး နေတတ်ပြန်ရော..၊ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဘဝနေနည်းကို ထင်းကနဲ ပြလိုက်တဲ့ ဘာသာပြန် ပို့စ်ကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲဗျာ..။
October 7, 2011 at 5:47 PM
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေး တစ်ခုပါဘဲ ခင်ဗျာ...။
ချောပြောသလိုပဲ.. တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်၊ အဲလိုကောင်းကွက်တွေကိုချည်း ကြည့်ကြမယ်၊ ပြောကြမယ်၊ ဆိုကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလေ...
ချစ်သူတွေကြားမှာ အဆင်မပြေတာ သေးသေးလေးတွေကနေ ကြာလာတော့ အစိုင်အခဲတစ်ခုလိုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
နှစ်ဦးသားကြား အပြစ်တွေမြင်ပြီးကောင်းကွက်တွေ မမြင်တတ်ကြဘူးလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက် အဲ့လို စုံတွဲတွေနဲ့ကြုံရင် အခုနည်းလေးအတိုင်း စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်ဗျာ။
October 8, 2011 at 1:00 AM
မှတ်သားစရာလေးတွေနဲ့အတူ ဖတ်သွားတယ်မမ တစ်ချိန်ချိန်တော့ အသုံးဝင်လာနိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ :)
ကွန်မန့်ပေးလို့ ရပြီမမ စကားမစပ် ပျော်လိုက်တာ ...:):)
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပိုစ်လေးပါဘဲ ။
October 8, 2011 at 1:23 AM
October 8, 2011 at 1:41 AM
အိမ်ထောင်ဖက်ရယ် သမီးရည်းစားရယ်မှ မဟုတ်ဘူး ... ကိုယ့်မိသားစု၊ မောင်နှမ၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ အထက်လူနဲ့ အောက်လူ ... ဘယ်သူနဲ့မဆို ဆက်ဆံတိုင်း ကောင်းကွက်လေးတွေ ရှာဖွေတွေးတောပြီး နားလည်မှုရှိစွာ ဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင် ပြဿနာဆိုတာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။
ခက်တာက များသောအားဖြင့် သူတပါးမကောင်းတဲ့ အချက်ကို အလွယ်တကူ မြင်တတ်ကြပေမဲ့ ကောင်းကွက်ကို မြင်ဖို့ကျတော့ ခဲယဉ်းနေကြတာ ... ။
အပြစ်ပြောဖို့လွယ်ပေမဲ့ ကောင်းတာလေးကို အသိအမှတ် ပြုဖို့ တော့ ခက်တယ်...ကိုင်း ဒီနေ့ က စပြီး ကောင်းတဲ့ အချက်လေးတွေကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရအောင်...
October 8, 2011 at 6:20 AM
ကောင်းတာလေးတွေဘဲစဉ်းစားပေးတတ်ကြရင် ဘဝလမ်းခရီးတွေ ဖြောင့်ဖြူးကြမှာပါ....
October 8, 2011 at 6:44 AM
Nice translation, sis, I love it. Yes people should tell to other the good character, behaviour, action they have done. Not bad things. But some people consider that telling bad things to other is honest saying and it's ok.
October 8, 2011 at 11:07 AM
ဟုတ်ကဲ့.. မှတ်ထားပါ့မယ်.. မချောရေ..း)))
October 8, 2011 at 3:36 PM
Good sharing....Chaw!....I agree with Aunty Oo.Let's try to do and say as the post said:)......Tks.
ဆရာတယောက်ကဆုံးမပါတယ်။ သူ့ (ကျမယောင်္ကျား)
အကြောင်းကောင်းတာတွေပဲတွေးပေးတဲ့။ သူမိမိပေါ် ကောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြောပေးပါတဲ့။ လူတိုင်းမှာတော့မကောင်းတဲ့အချက်ဆိုတာရှိတာပဲတဲ့။
ချောရဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး ဆရာဆုံးမတာ အမှတ်ရမိပါတယ်။
October 8, 2011 at 8:57 PM
ချောမွေ့တဲ့လမ်းကို လျှောက်လှမ်းတဲ့အခါ ပြုံးပျော်နိုင်သလို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို ကျော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်း အပြုံးမပျက် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး နားလည်ပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အခက်အခဲအားလုံး ကိုယ်နဲ့ဝေးရာကို တိမ်းရှောင်သွားမှာပါ။
စိတ်ဆိုးနေချိန်ကျတော့ ကောင်းခဲ့တာတွေ မမြင်တော့ဘူး ဟီး
ကောင်းတယ်ဗျာ။ ကြိုက်ပါတယ်။ နောက်လည်း အဲဒီလိုလေးတွေ ရှာဖွေတင်ပြပေးနိုင်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ မမြင်မသိသေးတာလေးတွေ သိရတာပေါ့။
October 9, 2011 at 5:10 PM
ကောင်းကွက်လေးတွေ ရွေးပြီး နှစ်သိမ့်ပေးတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်
လင်နဲ့မယားဖြစ်လာရင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေ ရှာကြည့်ပြီး မကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့လိုတယ်နော်။ မကောင်းတဲ့ အချက်ဆိုတာကိုယ် ကိုယ်တိုင်မှာတောင် ရှိနေတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် မပြုပြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကို ဖြည့်တွေးပေးဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ သာဓက လေးဗျာ
အခုမှာ ဖြင့် အထက်မှာ ဖေါ်ပြပေးထားသလို
လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ ကွယ်နေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို၊ အတွင်းစိတ်တွေကို ချူပြီးယူပြတဲ့နည်းကို သုံးထားတဲ့ ဒီနည်းလမ်းလေးက ချစ်စရာလေးပါလား ချောရေ..။
ပြီးရင် ဖတ်ခိုင်းရမယ်...။ :)
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြစ်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ရင် အရာရာဟာ ပြေလည်နေမှာပါ...
ဘယ်လို ဆက်ဆံရေးမျိုးမှာမဆို တယောက်ရဲ့ ကောင်းကွက်ကို တယောက်က ရှာဖွေ တွေ့ မြင်တတ်ဖို့ က သိပ်အရေးပါလှတယ်နော်
ကောင်းကွက်လေးတွေပဲ ရွေးမြင်တတ်နိင်ရင် ရန်ဖြစ်ရတာတွေ မရှိတော့မှာ အမှန်ပဲ။
တခြားသူကောင်းကွက်မြင်ပေးဖို့ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမှာက ကိုယ့်ရဲ့ မာန်တွေ ချပေးဖို့လို့ တွေးမိပါတယ်။